Su'aal: Joodariga iyo meelaha ad-adag ee jiifka ah, kee baa Caafimaad badan leh?
Author Topic: Su'aal: Joodariga iyo meelaha ad-adag ee jiifka ah, kee baa Caafimaad badan leh? (Read 4413 times)
« on: April 16, 2012, 01:32:01 AM »
Asc. Dhakhtar, marka uu qofku ku seexdo joodari ama isbuunyo, waxa dhacda in la soo tooso caajis halka marka uu qofku ku seexdo dariin ama sali ama wax kaloo adag, uu dareemo caajis+lafa xanuun iyo dhabar xanuun, marka Dhakhtar, jiifafkaan lagu seexdo waa lagu kala fiican yahay marka la eego da'da dadka. Haddaba, Dhakhtar, qofka dhalinta yar iyo qofka weyn, walxahaan kee baa mid walba ku haboon iyadoo ay dadka qaarkood duruufo dhaqaale haysato?
Re: Su'aal: Joodariga iyo meelaha ad-adag ee jiifka ah, kee baa Caafimaad badan leh?
« Reply #1 on: May 19, 2012, 04:50:13 PM »
Joodariyada adadag oo aan godka ahayn iyo kuwa loo yaqaanaba joodariyada caafimaadka, waxay u rooyihiin lafdhabarta, iyo murqahaba.
Joodariyada godka ama ama aadka u jilicsan uma roona qofka caafimaadkiisa ha ahaado qof wayn ama qof yarba, maxaayeelay qofka haduu in muddo ah u jiifo qaaf qalloocan waxay saameyn ku samaynaysaa murqihiisa iyo lafihiisa taas ayaana keenayso qofka in uu la soo kaco caajis, dhabarxanuun ama murqo xanuun.
« Reply #2 on: May 20, 2012, 02:14:23 AM »
Dhakhtar waad mahad san tahay, haddii ay meesha la jiifanayo tahay meel adag, sida darbi oo kale. Caafimaad xumo miyaa lagala kulmi karaa haddii ay hareeraha jidhka murmurxiyaan?
« Reply #3 on: May 20, 2012, 01:27:13 PM »
Waa in meesha aad jiifsanaysid ay ahaato meel siman, waana in aysan ahaanin meel adag sidii dhagaxii si cadaadis jirka u fuulin.
Fadlan raadso joodari adag.
Views: 10684 October 19, 2016, 06:58:27 PM
Views: 11044 May 19, 2011, 08:49:53 PM
Views: 42227 November 17, 2009, 07:36:08 PM
Views: 18355 October 16, 2011, 12:04:08 AM